Liverpool Iyo Man United Oo Babraro Gool La’aan Ah Ku Galay Guriga Liverpool +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Liverpool Iyo Man United Oo Babraro Gool La’aan Ah Ku Galay Guriga Liverpool +Sawirro
Kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa barbaro ku galay Anfield kulan aad u adkaa oo Klopp iyo Mourinho ay saddexda dhibcood ku qaybsadeen. Goolhaye David De Gea ayaa noqday halyayga Manchester United badbaadiyay ee guuldaro ka badbaadiyay wuxuuna sabab u ahaa in Red Devils ay hal dhibic oo muhiim ah ay kala soo laabtay Liverpool.
De Gea ayaa sameeyay lababa gool badbaadineed oo layaableh isla markaana muujiyay tayadiisa ciyaareed iyo in uu waqti xaadirkan ka mid yahay laba ama saddexda goolhaye ee aduunka ugu fiican. Coutinho iyo Emre Can ayaa u muuqday kuwo shabaqa gaadhay laakiin De Gea ayaa laf dhun gashay ku noqday halka Ibrahimovic uu Man United uhelay fursadii ciyaarta ugu fiicnayd. Man United ayaan qaybtii danbe ee kulankan wax saamayn ah ku yeelan halka inta badan qaybtii hore ay ahayd kooxda awooda sare lahayd.
Guud ahaan qaybtii hore ee kulankan ayaa noqotay qaab aan laga filayn waxayna labada kooxood noqdeen kuwo aan si xoogan ugu dhiiran dhinaca weerarka waxayna awooda saarayeen in ay iska ilaaliyaan qaladaad dhinaca difaaca ah.
Manchester United ayaa 30 kii daqiiqo ee ugu horeeyay ahayd kooxda inta badan kubbada haysatay isla markaana u muuqatay in ay fursado abuuri karto halka Liverpool ay ciyaarta si gaabis ah ugu soo laabanaysay isla markaana ay 15 kii daqiiqo ee ugu danbeeyay qaybtii hore ay gacanta sare lahayd.
Kulan Liverpool iyo Manchester United u dhexeeya isla markaana ay Mourinho iyo Klopp iskaga hor yimaadeen ayaa laga filan karayay in ay xamaasadu ay cirka isku shareeri doonto balse taxadarka difaac ee ay labada kooxood samaynayeen iyo ku dhiiranaan la’aantii weerarka labada kooxood ayaa qaybtii hore ee kulankan ka dhigtay mid aan lagu raaxaysan.
Liverpool iyo Manchester United ayaa min hal bartilmaameed oo kaliya sameeyay 45 kii daqiiqo ee qaybtii hore ee kulankan waxayna cadayn u tahay sida ayna Karius iyo De Gea halis badan u arkin. Manchester United ayaa tuuray 5 darbo laakiin 4 ka mid ah ayaa hawada maray halka Liverpool ay laba darbo oo kaliya tuurtay isla markaana uu mid ka mid ah bartilmaameedkiisa helay. Man United ayaa boosishanka lahayd boqolkiiba 66% halka Liverpool ay lahayd boqolkiiba 34%.
Laakiin Manchester United ayaa gaashay qaladaadkii ugu badnaa iyada oo 11 qalad gashay taas oo keentay in Eric Bailly iyo Ashley Young kaadhadhka digniinta ah loo taago waxayna ahaayeen labada xidig ee qaybtii hore labada kooxood kaadhadh ka qaatay halka Liverpool ay shan jeer oo kaliya qalad ku gashay xidigaha United . Si kastaba ha ahaatee, qaybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
DAQIIQADII 55 AAD FURSADII CUMRIGA!. Manchester United ayaa heshay fursadii ugu horaysay ee ciyaarta ugu halista badnayd waxayna u muuqatay in ay heshay goolka furitaanka kadib markii uu Zlatan Ibrahimovic helay fursad cajiib ah waxaana kubbad qurux badan difaaca Liverpool ka dulqaaay Paul Pogba laakiin darbada uu Ibra madaxa ku sameeyay ayaa goolka Liverpool iska hor martay.
Waxayna ciyaartu noqotay mid goolal laga filan karo isla markaana ay weerarka Liverpool dardar badan samaynayeen halka Man United ay bilawday in ay weeraro deg deg ah Liverpool ay ku waxyeelayso.
DAQIIQADII 71 AAD Liverpool ayaa heshay fursad LAYAABLEH kadib markii uu Philippe Coutinho uu kubbad cajiib ah meel fog kaga tuuray goolka Man United basle jawaab celinta goolhaye David De Gea ayaa ka yaabisay Coutinho oo isaga laftiisu dadka ka yaabsaday.
DAQIIQADII 83 AAD Valencia ayaa kooxdiisa ka badbaadiyay fursad ay Liverpool kula iman lahayd goolka furitaanka kadib markii uu Roberto Firmino kubbad kula soo baxay De Gea laakiin taakalka guulaystay ee uu Valencia sameeyay ayaa Firmino ka beeniyay fursad layaab lahayd. Markii uu Firmino fursadan lumiyay Klopp ayaa markiiba ciyaarta ka saaray wuxuuna kaydka uga yeedhay Origi.
Wax walba ay Liverpool qaybtii danbe samaysay iyo fursad abuuristeeda ayaa dhaafiyay difaaca Man United iyo goolhaye David De Gea waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah taas oo ay labada kooxood dhibcaha ku qaybsadeen.